Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 10/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 10/05/2019
(နေပြည်တော်၊ ၁၀-၅-၂၀၁၉ ရက်)
Union Minister U Kyaw Tint Swe receives Representatives of UNDP and UNHCR
Naypyitaw May 9
Union Minister U Kyaw Tint Swe received Mr. Peter Batchelor, Resident Representative of the United Nations Development Programme, and Mr. Johan Cels, Representative of the United Nations High Commissioner for Refugees at his office in Nay Pyi Taw on9May 2019.
During the meeting, they discussed about the extension of MOU signed between the Ministry of Labour, Immigration and Population, UNDP and UNHCR on6June 2018 to assist the efforts of Government of Myanmar in undertaking the repatriation process for the displaced persons from Rakhine as the Tripartite Agreement will expire on6June 2019. And Union Minister reaffirmed the readiness to extend the MOU for another one year.
Yangon May 9
At the meetings, the chairman of the committee, U Aye Tha Aung, said this is second meeting between the committee and political parties, Rakhine communities, and experts. The suggestions and views shared in the previous meeting were submitted to the President in an interim report. And then he requested the attendees at the meetings to openly discuss and suggest ways for resolving the conflicts in the state.
Afterwards, the attendees discussed measures for dealing with conflicts and displaced people in Rakhine, along with short-term and long-term plans for peace, stability, and development in the state.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေသည် UNDP ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Peter Batchelor နှင့် UNHCR ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Johan Cels တို့အား မေလ ၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကူအညီပေးနိုင်ရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ UNDP နှင့် UNHCR တို့အကြား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရေး အတွက် UNDP နှင့် UNHCR တို့မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) ၏ သက်တမ်းအား တစ်နှစ် ထပ်မံတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ထပ်မံအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရခိုင်အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရှင်များနှင့် ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းသည့် အစည်းအဝေးကို မေလ ၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၌ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယနေ့ကျင်းပသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ကော်မတီနှင့် ပြီးခဲ့သည့်အခေါက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရခိုင်ပဋိပက္ခ ၊ ရခိုင်ပြဿနာအပေါ်တွင် မိမိတို့၏ အမြင်၊ သဘောထားများကို အကြံပြုတင်ပြခဲ့ကြ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ကော်မတီအနေဖြင့် ယင်းတင်ပြချက်များကို ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်ရေးသားပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယနေ့တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပဋိပက္ခပြေငြိမ်းစေရန် မည်သည့်အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်ပါက ကောင်းမွန်နိုင်မည်ဆိုသည်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြဆွေးနွေးပေးစေလို ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။